यसरि इन्स्टल गर्नुहोस पुराना कम्युटरमा विण्डोज ११ - हिमाल दर्पण
यसरि इन्स्टल गर्नुहोस पुराना कम्युटरमा विण्डोज ११
माइक्रोसफ्टले विण्डाेजको पछिल्लो संस्करण विण्डाेज ११ सावजनिक गरेको छ । विण्डाेज इलेभेन इन्स्टल गर्न खोज्दा धेरै पुराना कम्युटरमा इन्स्टल नहुन सक्छ । तर, पुराना कम्युटरमा पनि यसलाई सहजै इन्स्टल गर्न सकिन्छ ।
विण्डाेज ११ सपोर्ट गरेन भन्ने तलको तरिकाले इन्स्टल गर्नु होस् :
१. विण्डाेज ११ अपरेटिङ सिस्टम डाउनलोड गर्नुहोस् :
विण्डाेज ११ अपरेटिङ सिस्टम डाउनलोड गर्न माइक्रोसफ्टको वेबसाइटमा जानुहोस् र डाउनलोड विण्डाेज ११ अप्सनमा जानुहोस् । डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गरी डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुहोस् । आफ्नो भाषा छनोट गरी कन्फर्म अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र ६४ विट डाउनलोड अप्सनमा गएर डाउनलोड गर्नुहोस् ।
विण्डाेज ११ अपरेटिङ सिस्टम डाउनलोड भइसकेपछि अब अर्को प्रक्रिया पछ्याउनु पर्छ ।
२. सीपीयू जाँच बाइपास गर्नका लागि विण्डाेज रजिष्ट्रीलाई सच्याऔं
यसका लागि किबोर्डमा गएर विण्डाेज र आर थिच्नुहोस् । अनि खुलेको रन विण्डाेमा regedit टाइप गर्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस् ।
अब खुल्ने विण्डाेमा Computer\_HKEY_LOCAL_MACHINE\_SYSTEM\_Setup\_MoSetup, पेस्ट गर्नहोस् वा HKEY_LOCAL_MACHINE मा क्लिक गरी System and Setup र त्यसपछि MoSetup मा क्लिक गर्नुहोस् ।
त्यसपछि दायाँपट्टि देखिने New > DWORD (32-bit) Value मा गएर “AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU” माइनस टिक लगाउनुहोस् ।
आफूले निर्माण गरेको नयाँ भ्यालुमा डबल क्लिक गर्नुहाेस् र भ्यालु डेटामा ‘1’ इन्टर गर्नुहोस् ।
अब OK बटनमा थिचि विन्डो बन्द गर्नुहोस् ।
३. डाउनलोड गरेको अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नुहोस्
सुरुमा हामीले कम्युटरमा डाउनलोड गरेको विण्डाेज ११ अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नुहोस् । यसको लागि डाउनलोड भएको फाइलमा राइट क्लिक गरी Open with > Windows Explorer गर्नुहोस् । र, फाइलमा डबल क्लिक गरी सेटअप अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् ।
यत्ति गरेपछि तपाईंको पुरानो कम्युटरमा पनि विण्डाेज ११ इन्स्टल हुन्छ ।.अनि यसलाई तपाई चलाउन सक्नु हुने छ।
by Ramesh ६ घण्टा अघि
by Mangal ६ घण्टा अघि
by Himal Darpan १२ घण्टा अघि